🥇 ▷ Waxyaabahan maskaxda ku hay markaad isticmaaleyso Xiaomi Mi Band 4 (haddii aad rabto inaad sii socoto) ✅
Waxyaabahan maskaxda ku hay markaad isticmaaleyso Xiaomi Mi Band 4 (haddii aad rabto inaad sii socoto)
The Xiaomi Mi Band 4 Waa mid ka mid ah qalabka gacanta lagu qaato ee ugu caansan. Marka laga reebo shaashadda midabkiisa iyo waxoogaa horumar ah, ma dhihi karno wuxuu ahaa mid aad u weyn marka loo eego Mi Band 3, oo sidoo kale yimid NFC suuqyadeena la’aanteed. Hadaad leedahay Mi Band 4, kuwaa fiiri kuwaan Adeegso talooyin taas oo nolosha ka dhigi doonta jijimiyaha muddo dheer kana fogayn khaladaadka si xun u isticmaalka.
Xiaomi lafteeda ayaa mas’uul ka ah buug-gacmeedka isticmaalaha inuu na xasuusiyo waxyaabaha aan ku qaban karno ama aan ku sameyn kareynin geesaha. Haddii aan fulino qaar xeerarka fudud ee isticmaalka, waa hubaal in Mi Band 4 ay inbadan sii dheerayn doonto oo ay ka fogeyn doonto adeega farsamada ee laga cabsi qabo. Waa run in jijimadu ay biyuhu yihiin, Thanks to cIP 5 ATM oo la xaqiijiyay, laakiin tan micnaheedu maahan inaan ku nasan karno isticmaalkeeda biyo.
Iibso Xiaomi Mi Band 4 oo qiima dhimis leh Amazon
Biyo ka soo horjeedaa, laakiin iska jir!
Xiaomi wuxuu sheegayaa in Mi Band 4 lagu qaadan karo qubayska, barkadda dhexdeeda ama inta lagu dabaalanayo meel u dhow xeebta. Si kastaba ha noqotee, waa inaan xasuusnaano iska saar intaadan gelin sawnada ama hel si aad u quusato. Taasi waa, uumiga biyuhu kuma haboonayo jijimmada oo wuxuu noqon karaa nugul. Intaa waxaa sii dheer, waa in la xasuusnaadaa in heerkulka qalliinka ugu badnaan lagu taliyay waa 50 digrii, sidaa darteed xadkaasi waa la dhaafi karaa si aad u fudud haddii aad xirato.
Waa inaan sidoo kale kala saarno quusitaanka iyo quusista. Taasi waa, waxaan ku dhex quusin karnaa jijimadda waqti kasta, laakiin waa inaan u qaadno inaan biyo ku quusno, maaddaama jijimadu ay la kulmi doonaan cadaadis ka badan inta la oggol yahay iyo muddo dheer. Badhanka taabashada iyo shaashadu ma jiri doonan biyo hoosaad, sidaa darteed waa lagugula talinayaa maro jilicsan isticmaal si looga saaro biyaha xad dhaafka ah dusha sare ka hor intaadan mar labaad isticmaalin. Sidaas oo kale, inta lagu jiro maalin kasta isticmaalka waxaa lagu talinayaa in laga fogaado la qabsashada jijimaha curcurka oo aad u adag, iyo sidoo kale inuu dusha sare ka dhigo mid nadiif ah oo engegsan.
Waxaa suurta gal ah in maqaarku uusan u dhaqmin si la mid ah hal isticmaale ilaa mid kale, Xiaomi lafteeda ayaa sidoo kale tilmaamaysa haddii maqaarkaaga taabashada maqaarku ay muujiso calaamadaha casaanka ama bararka, waa inaad isla markiiba joojiso adeegsiga sheyga oo aad raadsato gargaar caafimaad. Ka hor inta aan tuurin jijimka waxaan sidoo kale isku dayi karnaa inaan bedelno suunka, sida portals sida Amazon Waxay ka buuxaan xulashooyin kala duwan oo ay ku habaynayaan Mi Band 4, marka lagu daro agabyada kale ee dhaafsiisan heerka caadiga ah ee jijabka.